Umbala wehashe | Ukufumana imibala yamaphepha asimahla
Umbala wehashe lombala
Akukho nto inomdla kubantwana ngaphezu kwezilwanyana zabo. Nangona inja, iikati kunye nokubambisana. Ingaba zizilwanyana ezifuywayo kakhulu, umnqweno wokufunda ukukhwela uphezulu kwinqwelo elinqwenelayo. Kwaye ngenye imini iholide enkundleni yokugibela yonke into eyonwabileyo.
Ukukhangela ihashe lekhasi elivulekileyo njengemifanekiso
Ukukhangela ihashe lekhasi kwinqanaba
Ukubonisa imibala yeefama yefama ukuxuma
Ukukhangela ihashe lekhasi kunye nefesi kwidlelo
Ukukhangela ihashe lekhasi kwifama
Ukukhangela ihashe lekhasi
Umbala wekhasi lomncinci kwihashe
Izilwanyana ezinomthunzi webhedi - iilokhwe zamahashe